Top:- Tiiraanyada Madaxweyneyaashii Somalia ma isweydiiyay Madaxweyne Garguurte? Fariin.
01 Janaury 2013 Waagacusub.com- Somalidu waxay tiraahdaa "TAGTE DAAYE TIMAADO QABO" laakiin taariikhda marna lagama tilaabsan karo maxaa yeelay Sooyaalkeena wuxuu sawir ka bixinayaa suranka dheer ee Somalida soo martay,waana sababta aan kuugu soo qorayo fariintaan qiyaasteeydu tahay inaad si degan u akhrin doontid. Waa run waxaad tahay aqoonyahan iga weyn balse ma isweydiisay Tiiraanyada ku hardhan taariikhda nolosha iyo geerida Madaxweynayaashii kaaga horeeyay xilka Madaxweynenimada Somalia?
Ma isweydiisay kuwii dhintay iyo kuwa nool heerarkii noloshooda iyo tan ay maanta ku sugan yihiin.
Inta aan Sheekada u gelin laga soo bilaabo Madaxweynahii ugu horeeyay ee Somalia Adan Cabdulle Cisman iyo kii ugu dambeeyay ee aad ka guuleeysatay Shariif Sheekh Ahmed marna ma dhicin in Madaxweyne soo maray talada Somalia uu mar labaad ku guuleeysto tartan uu Madaxtooyada u galay si uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia u sii ahaado sidaas darteed Mudane Madaxweyne ,Hassan Mohamud Alasow waxaan kugula talinayaainaad hamigaada ka saarto afar sano kadib inaad kursiga Madaxtooyada doorasho xora dib ugu tartanto.
Waan kuu faahfaahin doonaa sababta aan quusta uga muujiyay inaad xilligaada kadib xilka Madaxweynenimada dib ugu tartanto balse aan ku xasuusiyo Tiiraanyada Madaxweyneyaashii soo maray Somalia.
Allaha u naxariistee,Madaxweyne Adan Abdulle Cisman ayaa ugu horeeyay,wuxuuna dalkiisa hooyo ku geeriyooday asagoo toban sano sariir saarnaa,miisaankiisuna lagu qiyaasay 15 Kiilo Mudadii uu noolaa wuxuu heestay xoriyad laakiin marna looma maamusin heer gaarsiisan Madaxweynahii ugu horeeyay ee Jamhuuriyadda Somalia.
Allaha u naxariistee, Madaxweyne Abdirashiid Cali Sharmarke ayaa ku xigay waxaana lagu toogtay Laascaano,waliba isagoo taagan sidaas ayuuna xilka uga tegay.
Allaha u naxariistee,Mohamed Siyaad Barre ayaa Abdirashiid kadib talada Somalia awood Melleteri kula wareegay,wuxuuna ku geeriyooday Nageria .
Mohamed Siyaad Barre oo noqday hogaamiyahii ugu awooda badnaa geeska Afrika wuxuu geeriyooday asagoo qaxootiya.
Waxaa xusid iyo Xasuusin mudan in Mohamed Siyaad xanuunka wadnaha ku dhacay kadibna inta Baabuur lagu qaado la waayay,Taxi lagu geeyay isbitaalka taasna xanuunkeeda inaad garwaaqsan doontid waa ila tahay.
Cali Mahdi Mohamed oo ka mid ahaa Jabhadii talada ka tuurtay Mohamed Siyaad Barre wuxuu ahaa ninkii Madaxweynenimada Somalia sheegtay sanadkii 1991 hasse yeeshee taariikhda aan fariintaan kuu soo diraya oo ku beegan sanadka cusub 01 Janaury 2013 wuxuu Cali Mahdi Qaxooti ku yahay Magaalada Nairobi.
Cali Mahdi ilama ahan inuu si xora u dhex lugeeyn karo Dalkiisa Somalia maxaa yeelay wuxuu ka qeybgalay Colaada Sokeeye,waxayna ila tahay inay xaqiiqadu sidaa tahay.
Allaha u naxariistee Mohamed Farah Caydiid oo diiday Madaxweynenimada Cali Mahdi wuxuu Muqdisho ku geeriyooday asaga oo dagaal Sokeeye ku jira.wuxuuna Madaxweynenimada Somalia sheegtay sanadkii 1994.
Madaxweyne Cabdi Qaasim Salaad Xasan ayaa xigay oo Shirkii Carte lagu doortay ,asagana maanta wuxuu Qaxooti ku yahay Dalka Masar .
Allaha u naxariistee Abdullahi Yusuf Ahmed ayaa noqday Madaxweynahii xigay Cabdi Qaasim ,isagana dagaal dheer oo kumanaan Somalia lagu xasuuqay markii uu Muqdisho ka geystay ayuu Yemen ku geeriyooday asagoo Qaxootiya.
Madaxweynahii aad ka guuleeysatay ,Shariif Sheekh Ahmed oo ahaa ninkii Madaxtooyada kala wareegay Abdullahi Yusuf wuxuu maanta Qaxooti ku yahay Magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Shariif Sheekh Ahmed wuxuu galaaftay nolosha kumanaan Somalia kuwaas oo marna uu Shaar diimeed ku laayay ,marna magac Dowladnimo.
Damaciisa Xukun Jaceylka wuxuu sabab u noqday inuu xanuunka isla hadalka Maskaxda ku dhaco.
Shariif Sheekh Ahmed Da''ahaan waa nin kaa yar oo wali 50 Jir ma gaarin.
Mudane Madaxweyne waxay sanadkaan Da''daadu geleeysaa 50 sano jir,wuxuuna waqtigaada Madaxtooyada ku eg yahay afar sano kadib oo aad noqon doontid 54 Jir
Su''aasheeydu waxay tahay ma wuxuu qorshahaagu yahay inaad raacdo Jidkii ay mareen Madaxweyneyaashii kaa horeeyay ,oo waxaad dooneysaa inaad adigoo 54 Jira dal Shisheeye ku noqotid Qaxooti mise waxaad dooneysaa inaad ka badbaado oo noqotid Madaxweyne taariikhda gala.
Labadaan waxaa sedex ku noqon karo inaad iska diido doorasho Madaxtooyo in la qabto oo talada dalka sii heysid ,ilaa inta aad ka dhimanee ama ku dhimaneysid .
Hadii sedexda qodob ka dooratid inaad taariikhda wanaagsan gashid ,waa inaad bulshada ku maamushid Cadaalad maxaa yeelay waa tan kaliya ee Qaran ku dhisnaan karo.adna qiimo ku yeelan kartid.
Hadiise aad dooratid Iririsim,Dam Jadiid iwm ogoow inaad ku aakhirsan doonto taariikh Madoow oo la mida kuwii towrada kaaga horeeyay.
Xasuusnoow Madaxdii Jamhuuriyadda soo maray waxay eersadeen Eex ,Qabyaalad iyo Cadaalad daro.
Ugu dambeyn waxaan ku leeyahay :-
Magacaagu yuu noqon
Mid xumaan ka mara kaca
Haka talin Masiibiyo
Wax makhluuqa kala dila
Maskax-daadu yey noqon
Maqal lagula leeyahay
OO boqol Muftaaxiyo
Lagu furo Masaabiir
Sida Macaawis iyo shaar
Ninba maalin yuu xiran
Dhambaalkeeyga Kooban wuxuu ku jiraa Khudbadeyda sanadka ,waxaana uga hadli doonaa si faahfaahsan.By Dahir Alasow. Topnews:-Madaxweyne Gargurte oo Somaliland u ogoladay daakhiliyad 10 sano Waagacusub is Investigative media with sense of professionalism, fearless in cultivating the truth, informative, unbiased, independent, educative, a role model and a voice to the voiceless.